China Mazuva ese Kudzivirirwa Isiri-kwekurapa UV Chiedza Chena Isingarasike Chiso Mask fekitori nevatengesi | Njodzi
Mazuva ese Kudzivirirwa Isiri-yekurapa UV Mwenje Yakachena Inoraswa Chiso Mask
Dziviriro yezuva nezuva isiri-yekurapa UV mwenje isina kuchena inoraswa kumeso maski 10 pcs pane yakavharika bhegi repurasitiki, CE standard uye FDA yakanyoreswa, iyo 3 dura dhizaini (2 matanda eisina-yakarukwa machira uye 1 dura reBFE 95% yakanyungudika-yakaputirwa jira) inopa zvakakwana dziviriro yeguruva, dzihwa nezvimwe, zvakakodzera kutengesa kuchitoro chekutengesa uye supamaketi.
Zvinhu: Asina kurukwa jira + Meltblown firita jira + Asina kurukwa jira
Saizi: 17.5 * 9.5 masendimita
Feature: Disposable, nyore, guruva-chiratidzo, anti-hutachiona
Standard: EN149-2001 + A1 2009 ， GB / T 32610-2016
Pasuru: 10 PCS / Bhegi, 2000 PCS / CTN
Chigadzirwa Chigadzirwa cheFace mask:
Disposable face mask inoumbwa nemasikiri muviri, maski bhendi uye simbi tambo. Iyo maski muviri unogadzirwa neisina-yakarukwa machira uye yakanyungudika-yakaridzwa nonwoven jira. Iyo simbi tambo inoitwa nezvinhu zvinoshanduka.
Main Performance Zviratidzo:
Hutachiona filtration kunyatsoshanda haufaniri kunge uri pasi pe 95%. Kufema nemhepo kusagadzikana hakuzove kwakakura kupfuura 49Pa / cm2. Huwandu hwenzvimbo dzemabhakitiriya huchave≤100CFU / g. Escherichia coli, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus, hemolytic streptococcus, fungus haifanire kuonekwa.
1. Usati washandisa, tarisa kana kurongedza kuri mumamiriro akanaka uye simbisa kupera kweichi chigadzirwa.
2. Vhura kurongedza, tora maski, wedzera uye dhonza iyo masikisi kumeso nemaoko uye chengeta simbi inobvisa kumusoro uye nedivi nemipendero pasi pasi; Dhinda tambo yesimbi kubva pamhino yemhino kusvika pamativi maviri nezvigunwe zvemunwe kugadzira chidimbu chesimbi pamusoro pebhiriji remhino uye masak pamusoro pechiso.
Pashure: DC Cable 1500V H1Z2Z2-K Solar Panel waya waya 6mm2
Zvadaro: 125A 160A 250A 3 Pole AC MCCB Yakaumbwa Nyaya Yedunhu Remagetsi
COVID 19 Anti Virus Civil KN95 Earloop Chiso Mas ...